FIHANAKY NY ARETINA PESTA : Mitafy henatra tanteraka i Madagasikara eo imason’izao tontolo izao
Ratsy endrika eo anatrehan’ny mason’izao tontolo izao i Madagasikara. Laza ratsy ho an’ny firenena malagasy ny tsy fahafehezan’ny mpitondra fanjakana ny areti-mandoza pesta, ahiana hitoka-monina tsy fidiny vokatr’izany i Madagasikara sy ireo vahoaka ao aminy. 3 octobre 2017
Tsy takona afenina intsony fa miharihary eo imason’izao tontolo izao ny fisian’ny pesta eto amintsika. Ankoatra ny gazety mpiseho isan’andro, ny radio sy ny fahitalavitra eto an-toerana tsy mitsahatra mamoaka izany isan’andro dia maro amin’ireo fahitalavitra any ivelany ihany koa mivoy ity vaovao ity foana.
Mitafy henatra tanteraka i Madagasikara manoloana izany, hatramin’izao mbola lamasirin’ny aretin’ny fahantrana ihany. Taorian’ny fahafatesan’ilay teratany vahiny vokatry ny pesta dia azo antoka zato isan-jato fa hisy fiantraikany amin’ny lafiny fizahantany ity trangan-javatra ity. Ny tena zava-doza anefa dia ahiana ho voailikilika ihany koa ireo teratany malagasy mikasa ho any ivelany sao ahian’ny olona mitondra “pesta”.
Azo lazaina ho nampangain’ny kobaka am-bava nataony ihany ny minisitry ny fitsarana. Nilaza ity farany tamin’ireny fotoana nandripahan’ny pesta olona maro tany Toamasina ireny fa efa voafehy ny aretina. Izao anefa mibaribary tanteraka fa mbola tsy mitsaha-mitombo isan’andro ny isan’ireo voany sy ny maty ary tsy any amin’ny faritany akory fa eto an-drenivohitra mihitsy. Miandry izay fialana balan’ny fanjakana indray ny vahoaka taorian’iny fahafatesana vahiny iny. Dradradradraina isan’andro fa “efa misy ny fepetra horaisina, tsy maintsy voafehy ny aretina” kanefa aiza akory izay vokany hatreto.
Tsy mahagaga ihany anefa izany satria efa fanaon’ny olon’ny fitondrana ankehitriny ny fanaovana kabary ambony latabatra fa tsy hita izay tena zavatra hita mivainga. Mibaribary tanteraka ny tsy firaharahian’ny mpitondra ny sosialim-bahoaka izay lazain’izy ireo ho fitsikerana tsy misy farany. Tsy misy afatsy ny fifikirana eo amin’ny toerany no mahamaika azy ireo kanefa ny pesta aza tsy voafehiny. Tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana.
Ity farany tokony hametra-pialana rehefa tsy mahita vahaolana manoloana izao fihanaky ny aretina izao. Fanampin’ny aretina mbola eo am-pianahany no lazainy fa efa voafehy izay nandiso fanantenana ny ankamaroan’ny Malagasy.